မြန်မာနိုင်ငံမကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ မဟာမိတ်အဖွဲ့လုပ်ငန်း စတင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ မဟာမိတ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁ရက်နေ့မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်အသင်းဖွဲ့များမှ နားလည်မှုသဝဏ်လွှာတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း အခမ်းအနားကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းရုံး တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၉ ရက်နေ့ က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ မဟာမိတ်အား အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံတော်/ပြည်တွင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာစားသုံးသူများ သမဂ္ဂကလည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အခမ်းအနားတက်ရောက်ကာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ 1. People’s Health Foundation (PHF) 2. Myanmar Diabetes Association (MMDA) 3. Shwe Yaung Hninsi Cancer Foundation […]